Ithimba le-YALIS - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
1. Ukuthintana nemakethe: Ithimba le-YALIS R&D liwumnyango wocwaningo ozinikele ekuthuthukisweni kokubukeka, ukusungula izinto ezintsha, ucwaningo lobuchwepheshe nezinye izixazululo zemikhiqizo.Kukhona imiklamo yesitayela emisha engu-8-10 eza emphakathini minyaka yonke.
2. Dala okufunayo kuzo zonke izinqubo: kusukela ekuklameni okusalungiswa kuya ekuphrinteni kwe-3D, ukubumba, siqinisekisa ukuthi inqubo ngayinye idala ngezitayela nokucabangela.
Ngesikhathi sokukhiqiza nangemva kokuthengisa, sinakekela ngokugcwele inqubo ngayinye ukuze sinikeze amakhasimende ethu imikhiqizo namasevisi asezingeni eliphezulu.
Umnyango wezokukhangisa onamandla uthuthukisa ibhizinisi lenkampani futhi uqhubekisela phambili ukuthengiswa kwemikhiqizo, amasevisi, kanye nokugcina ijubane lemakethe kanye namakhasimende liqinile.I-YALIS ineyayo.Bancane ngomdlandla, balandelela imakethe ngezikhathi ezithile.Ngokusekelwe kwizidingo zemakethe, bahlinzeka ngamasu eminyangweni yokuphromotha, yokuthengisa nokukhiqiza.Baphinde banikeze usizo kubathengisi bethu bezitolo/ama-ejenti wokuthi bangasebenza kanjani kahle ibhizinisi labo.
Umnyango Wokubambisana Kwamazwe Ngamazwe
Umnyango wokubambisana wamazwe ngamazwe ugxile ekusebenzisaneni nabadlali abaphezulu, okuhlanganisa abasabalalisi abaphezulu, abakhiqizi beminyango nosonkontileka emakethe yesifunda ngayinye kanye nendawo.Banikeza izeluleko zebhizinisi, futhi bayiqembu elithembekile elifanele ukubambisana ukuze kuthuthukiswe ibhizinisi lakho esikhathini esizayo.
Umnyango Wokulawula Ikhwalithi
Inqubo ngayinye ilawulwa ngokuqinile uMnyango wethu oqinile we-QC, i-YALIS ilandelela eduze futhi iqaphe ikhwalithi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza kanye nezinqubo zokukhetha abahlinzeki.Inqubo ngayinye asivumeli imikhiqizo yekhwalithi embi ukuthi ithengiswe emakethe.Konke ukufakwa okuyinhloko nezingxenye kuhlolwa ngakunye, ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho ukushelela kwezibambo ngenkathi uvula noma uvala umnyango.